Raha misy, zava-nitranga manan-danja na te hanintona vintana, dia afaka mamaky fikomiana manokana ianao. Ny fombafomba tsotra dia misy ho an'ny rehetra, fa ny tena manan-danja indrindra dia ny manana finoana tsy azo hozongozonina amin'ny vokatra tsara. Ny fampiasana môdika dia atolotra amin'ny alàlan'ny Moon.
Fikomiana handresy any amin'ny fitsarana
Raha toa ka misy fitsaràna, dia afaka manao fombafomba ianao amin'ny fanohanana fanampiny. Zava-dehibe ny mampiasa izany raha tsy hoe tsy manan-tsiny ianao ary mitaky fiarovana. Mandritra ny fivoriana ao amin'ny efitrano dia mila mijery ny mpanohitra ianao ary vakio intelo ny tenanao momba ny fikomiana handresy amin'ny fitsarana:
"Ahoana no ahavitanao (ny anaran'ilay mpanohitra) amin'ny alàlan'ny loto rehetra (la), noho izany dia mbola nanome ahy ny zo (la) indray aho. Amen. Amen. Amen. "
Fikolokoloana hahazo karatra
Ho an'ny mpiloka, ny vintana dia singa manan-danja amin'ny fahombiazana. Eo am-pinoana no hahasarika ny harena, dia tokony hampiadana tsikelikely ny rambon'io saka mainty sivy io. Raha afa-nandositra ilay biby, dia midika izany fa tsy azo atao ny miala sasatra amin'izao andro izao, satria misy risika goavana amin'ny fahaverezan'ny vola be.
Azonao atao koa ny mamaky ilay tetika ho an'ny fandresena goavana. Noho izany antony izany dia ilaina ny maka vovoka boribory maina. Tazony eny an-tananao izany, lazao ireto teny ireto:
"Ho avy miaraka amiko ny fahendrena sy ny tanjaka avy amin'ny ala. Nanangana azy ny Fitiavan'I Neny, nanapa-kevitra ny amin'ny fanasan'ny Tompo izy ho an'ny harena, ho an'ny tombony sy ny nofiko. "
Ny gara manify voadaroka eo akaikin'ny tongotra eo ambany latabatra toy izany: ny pine anankiray - ny ilany, ny faharoa - ny marina, ary ny fahatelo - alohan'ny anao.
Fihetseham-po vaovao tamin'ny Lalao
Manam-pananana ny asa fanombohana amin'ny fandraisan'anjara amin'ny loteria miaraka amin'ny tahiry kely ny manam-pahaizana, hany ka mora kokoa ny manintona ny vintana sy ny fandresena. Aorian'izany, afaka mandeha any amin'ny famoriam-bahoaka lehibe kokoa ianao. Ho an'ny fividianana ny tapakila dia ilaina ny miala amin'ny alatsinainy ary amin'ny fanahy tsara ihany. Tsy afaka mampiseho lotera novidiana ianao. Manolo-kevitra ny hametraka izany ao amin'ny toerana maizim-pito ary mandrakotra faktiora goavana amin'ny fahamendrehana samihafa, fa tokony hanontany foana ny tapakila hitondrana ny fandresena. Ilaina ihany koa mandritra ny andro mba hiresahana ara-tsaina amin'ny tapakila, saingy tsy mahazo izany. Ny alina alohan'ny fanisahana dia mila mividy tapakila ianao ary mivoaka miaraka aminy any amin'ny balcony na mijery ny varavarankely. Aorian'izay dia inoina imbetsaka ao anaty bitsibitsika ireto teny ireto:
"Mitondra loloha eo amin'ny rambony aho."
Mandritra izany, alaivo sary an-tsaina hoe ny isan'ny nomerao dia mivoaka ary lasa mpandresy ianao.
Fiatrehana mafy handresena
Ny tapakila amin'ny fombafomba dia tsy maintsy alaina amin'ny Alatsinainy, fa tsara indrindra ny manomboka ny teti-bola amin'ny Zoma. Rehefa mividy dia angataho ny mpivarotra mba hisafidy tapakila ho anao. Anatin'izany dia ilaina ny milaza ireto teny ireto:
"Vola amin'ny vola, ny safidy dia hanampy!"
Apetraho amin'ny toerana miafina ny tapakila, ary aza aseho amin'ny olona izany. Ny alarobia alohan'ny maraina, dia mendrika ny mandeha any amin'ny dobo akaiky akaiky miaraka amin'ny tapakila ary mijery ny rano, Milaza ireto teny ireto:
"Ticket-ticket ho an'ny vintana, vintana.
Manàna vola aho, ampio aho.
Raha ampy, dia be dia be,
Eny, mila tsy ao an-trano.
Mandehana am-pandehanako vola, mandehana faingana,
Ny tapakila loterim-pitaterana an-tanako,
Ny vintana sy ny vintana ary ny harena dia miantso ahy! "
Atsangano ao anaty rano ny tananao ary apetaho ilay tapakila, raha miteny izy hoe:
Aorian'io, avereno imbetsaka ny famafazana sy ny teny.
Ahoana ny fomba hanosehana tovolahy iray tsy misy vokany?
Ny fanambin'ny fanahy ao an-trano - fombafomba
Ordynsky amulet amin'ny tanany
Rite of money
Tetika fikomiana, raha ilaina maika ny vola
Privorot amin'ny labozia
Fombafomba ho an'ny vola ho an'ny Taombaovao
Fikorontanana ho an'ny ankizy hiresahana
Tolona amin'ny faniriana
Karohy eo amin'ny pèl
Ny paroasin'ny puppet-motanki manokana
Kolikoly momba ny fahasalamana - famantarana sy fomba hanesorana?
Fombafomba ho an'ny Taombaovao hahasarika vola
Vanga-tsikombakomba Vanga ho an'ny vola sy ny vintana
Ny fiovana dia manova, fa tsy mamela - toro-hevitra momba ny psikology
Zon'ny zatovo iray
Toe-pandaminana mihidy ho an'ny lamba
Inona no basy elektrika entiko hividianako trano?
Jeans mamihina amin'ny tananao
Nahoana isika no manonofy ny sotro?
Raha ny marina, raha voasesitany ao Rosia ny andian-dahatsary "Friends" ...
Ahoana ny fampiasana kilalao ara-nofo?
Toeram-pialan-tsasatra ho an'ny fandroana amin'ny tanany
25 alika tsy afaka hiandry anao amin'ny Halloween!
Trangan-javatra miavaka miisa 7 ho an'ireo biby izay nitarika fanandramana
Makrôlika misy menaka manitra
Ahoana no handroanana hamstera?
Inona no tsapan'ny tratra havia?
Sakafo hafahafa ho an'ny renim-pianakaviana
Orisoa amin'ny fomba ofisan'i Dior
Ireo jiro fohy ho an'ny vehivavy